တူရကီနိုင်ငံက ပထမဆုံး အသိဉာဏ်နည်းပညာသုံးသင်္ဘောတစ်စင်းအားထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ - Xinhua News Agency
အစ္စတန်ဘူလ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တူရကီနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး အသိဉာဏ်နည်းပညာသုံးသင်္ဘော TCG Ufuk အား ပြည်တွင်းအရင်းအမြစ်များဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်တွင် အစ္စတန်ဘူလ်မြို့၌ စတင်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ၎င်းမှာ စစ်သင်္ဘောဖြင့် တူရကီ နိုင်ငံ၏ ရေတပ်အင်အား အင်အား မြှင့်တင်မည့်အစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အစ္စတန်ဘူလ် သင်္ဘောကျင်းတွင် ပြုလုပ်သည့် သင်္ဘောရေချ အခမ်းအနား၌ တူရကီသမ္မတ အာဒိုဂန်က ယင်းသင်္ဘောအား တူရကီ အမျိုးသား အင်ဂျင်နီယာအစွမ်းပကားဖြင့်သာ တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး တူရကီနိုင်ငံအား ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပြည်တွင်း၌ စစ်သင်္ဘော ဒီဇိုင်းထုတ် တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် ၁၀ နိုင်ငံ စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ TCG Ufuk သည် နိုင်ငံတကာရေပိုင်နက်များ နှင့် အလွန်ပြင်းထန်သည့် ရာသီဥတုနှင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အခြေအနေများ၌ပါမကျန် ၄၅ ရက် ဆက်တိုက် တည်နေရာထောက်လှမ်းမှုလုပ်ဆောင် နိုင်ပြီး အမျိုးသားလုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုများအား အလျှင်အမြန် ဖော်ထုတ်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။
အဆိုပါ သင်္ဘောသည် အေဂျီယန် ပင်လယ်နှင့် မြေထဲပင်လယ်အရှေ့ပိုင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမည်ဟု ရည်မှန်းထားကြောင်း NTV က ဆိုသည်။
တူရကီနိုင်ငံ၌ အစောပိုင်းက MiLGEM အစီအစဉ် ဟု ခေါ်သည့် အမျိုးသား စစ်သင်္ဘော အစီအစဉ်တစ်ခုအားစတင်ခဲ့ရာ ယင်း တွင် ကင်းထောက်လှမ်းခြင်း၊စောင့်ကြပ်ခြင်း၊ အစောပိုင်းသတိပေးချက်လုပ်ဆောင်ခြင်း ၊ရေငုပ်သင်္ဘောဖျက်လက်နက်များအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း၊ မြေပြင်မှမြေပြင်ပစ်နှင့်မြေပြင်မှဝေဟင်ပစ် စစ်လက်နက်များနှင့် ကုန်းရေ နှစ်မျိုးသုံး စစ်ဆင်ရေးတွင် အသုံးပြုခြင်းတို့အား လုပ်ဆောင်ရန် စစ်သင်္ဘောငယ်များနှင့် တိုက်သင်္ဘောများအားတည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ အစီအစဉ်၌ စုစုပေါင်း သင်္ဘော ၈ စင်းတည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် တူရကီနိုင်ငံ၌ ဖျက်သင်္ဘော လေးစင်း အား ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း အကြီးအကဲဖြစ်သူက စီမံကိန်း၌ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ စုစုပေါင်း ၅၀ ကျော် အား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်။ (Xinhua)
Turkey launches 1st indigenous intelligence ship
ISTANBUL, Jan. 14 (Xinhua) — Turkey’s first intelligence ship, TCG Ufuk, produced with national resources, was put into service in Istanbul on Friday as part of the country’s efforts to increase its naval power withawarship program.
Speaking at the delivery ceremony in Istanbul Shipyard, President Recep Tayyip Erdogan said the ship was built with national engineering capabilities, putting Turkey among the 10 countries in the world that can domestically design, construct and maintainawarship.
According to press reports, TCG Ufuk would instantly identify threats to national security by navigating uninterruptedly for 45 days, including international waters, even under severe climatic and sea conditions.
The NTV broadcaster said the ship is expected to serve in the Aegean Sea and the eastern Mediterranean Sea.
Turkey earlier launchedanational warship program called the MILGEM project to build corvettes and frigates for reconnaissance, surveillance, early warning, anti-submarine warfare, surface-to-surface and surface-to-air warfare, and amphibious operations purposes.
Within the scope of the project, which consists of building eight ships in total, Turkey had launched four frigates.
The Presidency of Defense Industries said the locality rate in the project reached approximately 70 percent and more than 50 local companies are provided with job opportunities. Enditem
သမိုင်းအမွေအနှစ်နှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအားပေါင်းစပ်ထားသည့် တူရကီရှိ ပြတိုက်ဟိုတယ်
တူနီးရှားပင်လယ်ပြင်တွင် တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ လိုက်ပါလာသော သင်္ဘော ၄ စင်း နစ်မြုပ်မှုကြောင့် လူ ၁၂ ဦးသေဆုံး
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ သမ္မတ ရာထူးမှနုတ်ထွက်မည်မဟုတ်ဟု အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲပြော